RW Kheyre oo iska beri yeelay dikereetadii dhulka ee uu soo saaray Eng.Yariisow - Muqdisho Online
Home Wararka RW Kheyre oo iska beri yeelay dikereetadii dhulka ee uu soo saaray...
RW Kheyre oo iska beri yeelay dikereetadii dhulka ee uu soo saaray Eng.Yariisow
Qaar ka mida Ganacsatada Gobolka Banaadir, saraakiisha ciidanka iyo odeydhaqameedyo ka soo jeedo Gobolka Banaadir ayaa habeenadii la soo dhaafay waxa ay qadka teleefanka kula hadlayeen RW Kheyre ioo markaas ku sugnaa magaalada Kismaanyo. Dadkaas ayaa ka sheeganaayay dikereeto uu soo saaray Duqa magaalada Muqadishu oo la xiriirta dhulka ciidanka Badda oo dad madax ah horay loogu sharciyeeyay.
Hadaba markii Kheyre ku soo laabtay Muqadishu ayaa gudi ka socday dadkii qadka taleefanka kula hadlayay ay kula kulmeen Muqadshu. Dadka la kulamy oo isugu jiray saraakiil ciidan iyo ganacsato ayaa u sheegay in RW Kheyre ay qalad tahay tilaabada uu qaaday Eng Yarisow. Kheyre ayaa sheegay in uusan wax war ah u haynin cidnana ayan kala tashanin amarkaas. Waxa uu yiri ” waxaad igu tuhmeysaan in aan anigu wax ka ogaa amarka ka soo baxay xafiiska Gudoomiye Yarisow laakiin waxaan idin cadeynayaa oo aan idin xaqiijinayaa in aanan wax war ah u haynin amarkaas iyo cida ka danbeeysay”.
RW Kheyre ayaa yir : “anigu waxaan bishii Janaayo 10 keedii magaacaabay Gudi loo xilsaaray soo celinca Hantida Qaranka, gudigaas oo uu gudoomiye u yahay Cabdullahi Goodax Barre,.. Gudiga shaqada ayaa ay ku dhex jiraan walina warbixin kama soo soo saarin dhulka iyo qaabka loo soo celin doono”.
Hadalka ka soo yeeray RW Kheyre ayaa si dadban eeda dhulka u xawilayo Madadaxweyne Farmaajo taas oo keeni karto in Shacabka ku dhaqan magaalada Muqadishu loo tuso Madaxweyne Farmaajo in uu isagu si qabyaaladeysan ula dagaalamayo beelo gaar ah oo ku nool Muqadishu..
Mid ka mid dadkii la kulmay RW Kheyre ayaa u sheegay MOL in RW Kheyre warkiisu cadaa uuna iska beri yeelay in uu lug ku leeyahay Dikireetada ka soo baxday xafiiska Gudoomiye Yariisow.
Previous articleMadaxweyne Xaaf oo war kasoo saaray Doorashada Galmudug
Next articleRW Kheyre oo ku qasbay Xaad in uu ka laabto hadaladii uu sheegay iyo shirarka uu ka waday Muqadishu (Cadeymo)